10+ websaytyada ugu fiican manhwa sanadka 2021 - Akhri Manhwa, Manhua, Webtoon, Webcomics, Manga, Comics online
Cutubka 15 Cutubka 14
Cutubka 42 Cutubka 41
Cutubka 125 Cutubka 124
10+ websaytyada ugu fiican manhwa sanadka 2021
Shabakadaha webtoons -ka ugu fiican (manhwa) ayaa kuu sheegaya wax majaajilo Kuuriya ah 2021
Waa maxay webtoon?
Waxaa laga yaabaa inaad hore u ogaatay in majaajilada Kuuriya, oo sidoo kale loo yaqaan manhwa, ayaa markii ugu horreysay la sii daayay 1940 -yadii. Manhwa aad bay ugu kala duwan tahay dhammaan mowduucyada, taas oo soo jiidatay akhristayaal aad u badan tan iyo markii ugu horreysay. Xilli kasta, waxaa jiri doona astaamo kala duwan, taas oo macnaheedu yahay in manhwa ay tahay inay soo marto waxyaabo si looga fogaado waxyaabaha aan ahayn. Xilliga cusub oo leh tikniyoolajiyad horumarsan, manhwa hadda sidii hore looma daabaco, laakiin taa beddelkeeda manhwa waxaa loo daabacay sheeko dijitaal ah. Tani waa wax weyn oo aad ugu habboon akhristaha. Si kastaba ha ahaatee, manhwa wali waxay ku jirtaa luqaddii asalka ahayd, sidaa darteed akhristayaasha ajnabiga ah, way ku adag tahay inay wax akhriyaan. Waxaa jiray turjumaado badan laakiin tani weli sharci ma aha. Nasiib wanaag, maalmahan, mareegaha ayaa sheekooyin ku daray luqado kale oo badan, qaar badanna xitaa waxay ku bixiyaan lacag la'aan.
Noocyada caadiga ah ee webtoon
Fantasy: Illaa iyo hadda, waxaan had iyo jeer aaminsanahay in superheroes kaliya ay sameyn karaan waxyaabo aan caadi ahayn. Taasi ma sii shaqayn karto maanta halkaas oo hal -abuurayaasha hibada lihi ay leeyihiin sheekooyin qoraal ah oo innaga tagi doona “maanka garaacay”. Qaar ka mid ah magacyada caanka ah waa in la xusaa sida “Maalmaha Dhimatay”, “True Beuaty”,… manhwa maanta.
Jaceylka Manhwa: Haddii aad jeceshahay K-riwaayadaha, tani hubaal waa nooca adiga kuu ah. Waxaa jiray dhowr filim oo laga soo qaatay taxanahan. Filimaan ku saabsan shinbiraha foosha xun oo ku riyoonaya inay noqdaan maraq qurux badan ama sheekooyin qiiro leh oo taabanaya quluubta akhristayaasha. Magacyada qaar waa in la xusaa: “Quruxda Dhabta ah”, “Misaeng”,…
Ka sarraysa oo naxdin leh Manhwa: Noocani wuxuu la mid noqon karaa nooca khiyaaliga ah maxaa yeelay waxaa jira waxyaabo badan oo la mid ah. Si kastaba ha ahaatee, noocani sidoo kale wuxuu leeyahay farqi, oo ku jira walxaha ka sarreeya. Tusaale wanaagsan oo la xuso ayaa ah “Tirada Ibliiska 4” oo ay gabadhu doonayso inay wax walba haysato sida ay wax u samaysana waa inay nafsadeeda siiso shaydaanka si ay u hesho.
Halyeeyga Manhwa. Magac caan ah “Baastari” waa filim gaaban oo ku saabsan wiil nasiib -darro ah oo aabbihiis uu yahay gacan -ku -dhiigle. Maxaa dhacay?
BL Manhwa: BL waa nooc soo baxay dhawaan. Kani waa nooc ka hadlaya jaceylka ka dhexeeya laba wiil oo inta badan loogu talagalay akhristayaasha dumarka ah. Sababaha webtoons manhwa waxay noqonayaan kuwo caan ah.
Waxaa jira kumanaan sababood oo ay webtoon -ku u noqonayaan kuwo caan ah oo caan u ah akhristayaasha. Midda koowaad waa daabacaadda webka. Dib ugu noqoshada maalinta webtoon -ka ayaa la daabici doonaa taasina waxay ahayd waqti iyo lacag badan. Laakiin hadda webtoon -ka waxaa lagu daabacay onleenka waxayna akhristayaashu u baahan yihiin oo keliya aalad moobayl oo ku xiran internetka si ay u awoodaan inay akhriyaan taxanahooda ay jecel yihiin. Haddii la daabaco, akhristahu waa inuu bog kasta rogaa, laakiin hadda taleefanka, kaliya kor u rog si aad akhriska u sii wadato. Codsiga onlaynka ah, webtoon -ka ayaa loo soo bandhigay si qurux badan, qaab -dhismeedku waa cad yahay, waa sahlan yahay, waana u sahlan yahay akhristayaasha inay adeegsadaan. Horumarinta tiknoolajiyadda hadda jirta, adeegsadayaashu waxay doorbidaan inay taleefannadooda u adeegsadaan inay wax ku bartaan halkii ay buugag ku hayn lahaayeen. Meel kasta, waqti kasta waxay akhrin karaan webtoon -ka. Sidaan kor ku soo sheegnay, manhwa webtoon -ka waxaa lagu turjumay afaf badan, taas oo macnaheedu yahay in webtoon -ku uu gaaray akhristayaal badan oo adduunka ku baahsan.
Haddii aad tahay qof jecel webtoon, waad heli kartaa webtoons ugu fiican online -ka ah liiskan 2021 -ka
4 - Majaajilooyin badan